Chineke Akpọọ Samuel Òkù | Ihe E Ji A Kụziri Ụmụaka Baịbụl
Jehova Agwa Samuel Okwu
Nnukwu Onye Nchụàjà aha ya bụ Ilaị nwere ụmụ abụọ. Ụmụ ya abụọ a bụ ndị nchụàjà. Ha na-eje ozi n’ụlọikwuu. Aha ha bụ Họfnaị na Finihas. Ha anaghị erubere Jehova isi. Ha na-emesi ndị mmadụ ike. Ndị Izrel weta anụ ha ga-eji chụọrọ Jehova àjà, Họfnaị na Finihas na-ewere ebe kacha mma na ya. Mgbe Ilaị nụrụ ihe a ụmụ ya na-eme, ọ gbachiri ha nkịtị. Jehova ọ̀ ga-ekwe ka ihe ọjọọ a nọgide na-eme?
Ọ bụ eziokwu na Họfnaị na Finihas tọgburu Samuel atọgbu, o soghị ha na-eme ihe ndị ahụ ha na-eme. Ihe a Samuel mere tọrọ Jehova ụtọ. Otu abalị Samuel na-ehi ụra, ọ nụrụ olu nọ na-akpọ ya. O biliri gakwuru Ilaị, ma gwa ya, sị: ‘Lee m.’ Ma Ilaị sịrị ya: ‘Akpọghị m gị. Gaa dinara ala.’ Samuel gakwara dinara ala. Ọ nụkwara olu ahụ ọzọ. Mgbe Samuel nụrụ olu ahụ nke ugboro atọ ya, Ilaị matara na ọ bụ Jehova na-akpọ Samuel. Ọ gwara Samuel na ọ bụrụ na ọ nụ olu ahụ ọzọ, ka ọ sị: ‘Kwuo, Jehova. Ohu gị na-ege ntị.’
Samuel gakwara dinara ọzọ. Ọ nụrụ olu ahụ ọzọ. Olu ahụ sịrị: ‘Samuel! Samuel!’ Ọ zara, sị: ‘Kwuwe, ohu gị na-ege ntị.’ Jehova gwara ya, sị: ‘Gwa Ilaị na m ga-emesi ya na ezinụlọ ya ike. Ọ ma na ụmụ ya na-eme ihe ọjọọ n’ụlọikwuu m, ma ọ gbachiri ha nkịtị.’ N’ụtụtụ echi ya, Samuel meghere ụzọ ụlọikwuu otú o si emebu. Ụjọ tụrụ ya ịgwa nnukwu onye nchụàjà ihe Jehova gwara ya. Ma, Ilaị kpọrọ ya, jụọ ya, sị: ‘Nwa m, gịnị ka Jehova gwara gị? Gwa m ihe niile.’ N’ihi ya, Samuel gwara Ilaị ihe niile.
Ka Samuel na-eto, Jehova ahapụghị ya. Ọ bịara doo ndị Izrel niile anya na Jehova ahọrọla Samuel ka ọ bụrụ onye amụma na onyeikpe.
“Cheta Onye Okike Ukwu gị n’oge ị bụ okorobịa.”—Ekliziastis 12:1
Ajụjụ: Olee otú àgwà Samuel si dị iche na nke Họfnaị na Finihas? Olee ozi Jehova ziri Samuel?
Kaadị Akụkọ Samuel
Samuel malitere ife Chineke mgbe ọ dị obere. Gịnị ga-enyere gị aka ime ka ya?
Samuel Kpebiri Ife Jehova
Samuel hụrụ ka ndị nchụàjà na-eme ihe ọjọọ. Gịnị nyeere ya aka ikpebi ife Jehova n’agbanyeghị na ndị ọzọ na-eme ihe ọjọọ?
Ònye Kpebiri Ife Jehova?
Foto a e ji akụzi ihe ga-enyere ụmụaka dị́ afọ 6 ruo afọ 8 aka ịmata ndị a kọrọ akụkọ ha na Baịbụl.